Fitohizanny hamehana ara-pahasalamana, fananganana ozinina mpamokatra fanafody sy toeram-pitiliana manokana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Les organisateurs visent 500 opérations gratuites pour avoir 500 sourires en 2022 il y a 13 jours
Rasoanjanahary﻿p il y a 1 année
Mitohy 15 andro indray ny hamehana ara-pahasalamana (fahadimy), araka ny nambaranny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, taminny fampitam-baovaom-panjakana TVM sy RNM ny alinny alahady 17 mey taminny 8 ora alina, ary nampitainny haino aman-jery tsy miankina ihany koa. Fanapahan-kevitra noraisina taminny filan-kevitry ny minisitra taminny sabotsy 16 mey io fitohizanny hamehana ara-pahasalamana io. Fa anisanny nisongadina taminny kabarinny filoha ny fanokafana toerana fanaovana fitiliana manokana ny covid-19 sy fanorenana ozinina mpamokatra fanafody tokanana mialoha ny 26 jona (efa nambarany taminny 3 mey fa afaka iray volana no hananganana ozinina famokarana fanafody lehibe indrindra aty Afrika). Naneho ny alahelony koa ny filoha taminny fahafatesanny olona iray tany Toamasina noho ny coronavirus. Navohitrany ny tsy fitandremanny olona aminny fanarahana ny fepetra napetraka ka nahatonga ny fiakaranny isanny tratranny tsimokaretina, ka hanamafisana ny fepetra sy hamaizana ireo mandika izany. Nomarihanny filoha fa tsy nisotro CVO ireo tratry ny tsimokaretina. Nametra-panontaniana ny filoha raha misy tsirambina na fahadisoanolombelona ny aminny tsy fitovianny isa tratry ny tsimokaretina, navoakanny Institut Pasteur de Madagascar (IPM) sy ny navoakanny fanjakana, ka namerenana ny fitiliana ary 10 taminireo 67 ihany no tena mitondra ny tsimokaretina. Nitondra fanazavana momba io tsy fitovianisa io moa ny tomponandraikitry ny IPM taminny 15 mey ary nilaza fa tsy ry zareo no manao ny prélèvement-nny singa alaina aminireo olona ahiahiana ho mitondra tsimokaretina, ary manaraka ny fenitra sy azo antoka ny fanaovana ny analizy ao aminy.
Mitohy hatrany isanandro ny fanomezana fanazavana momba ny tontolonny ady aminny covid-19 ao anatinny fanomezam-baovao momba izany avy eny aminny CCO covid-19, alefa aminny TVM sy RNM ary ny radio sy televiziona tsy miankina. Momba ny CVO (covid organics) manokana, tamininy herinandro iny, ho fitandrovana ny fahasalamana aminny ankapobeny, dia noantitranterinireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana toa ny Profesora isany Luc Rakotovao sy Rafatro Herintsoa fa « fahendrena ny tsy mandray azy raha misy aretina mitaiza na mampisalasala toy ny aretinny voa, ka tsara ny manatona mpitsabo, ary ho anireo nisotro ka misy vokany hafahafa, dia manatona ihany koa mpitsabo ». Ny fanentanana momba ny fisorohana fototra dia mitohy hatrany toy ny fitondrana masque rahefa mivoaka ny trano, ny fanasana tanana matetika aminny rano sy ny savony na ny gel désinfectant, ary ny fanajana ny elanelana iray metatra.
Eo aminny ara-panahy, dia mitohy ny fotoam-bavaka taminny haino aman-jery noho ny tsy mbola fisokafanny fiangonana rehetra taminny alahady 17 mey teo. Ho anny EKAR dia niainga hatrany tao aminny katedraly Andohalo ny lamesa nampitaina taminny radio sy televiziona IBC, notarihini Mgr Pascal Andriantsoavina, eveka mpanampy ao aminny diosezinAntananarivo. Niompana taminny fampatsiahivana ny didinAndriamanitra ny fifampizarana nentiny taminny toriteniny, araka ny evanjely taminio andro io ; anisanizany ny didim-pitiavana izay tokony ho hita taratra eo aminny fiainana andavanandronny mpino, manomboka ao an-tokantrano sy ny fianakaviana ary mipaka aminny fiarahamonina, indrindra manoloana ny ady iombonana iatrehana ny aretina ‘coronavirus’. Teny aminny Katedraly Ambohimanoro anny Eklezia Episkopaly Malagasy kosa no nanaovanny FFKM fiaraha-mivavaka nalefa taminny TVM sy RNM taminio alahady 17 mey io ihany. Nasongadini Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, nitondra ny teninAndriamanitra taminizany, ny anjara toeranny Fanahy masina eo aminny vahoakanAndriamanitra manoloana ny sedra atrehanny firenena mba hahitana ny lalan-kizorana, indrindra fa hankalaza ny Pantekoty ny Fiangonana atsy ho atsy. Ny pasitera Ammi Andriamahazosoa no nitondra ny ranom-bavaka izay niompana manokana aminny fangatahana fahasitranana aminny aretina samihafa mahazo antsika toy ny coronavirus sy ny dengue ary ny tazomoka ; teo ihany koa ny fitondrana am-bavaka ny firenena. Eny aminny FLM 67 ha indray no hanaovana ny fiaraha-mivavaka aminny alahady 24 mey.
Maherinny 4,8 tapitrisa maneran-tany no tratry ny tsimokaretina taminny 18 mey teo raha manakaiky ny 4 tapitrisa taminny 11 mey, ary maherinny 317 000 ireo namoy ny ainy (manakaiky ny 280 000 taminny 11 mey). Ho ani Madagasikara, araka ny tatitra nentinny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialy momba ny covid-19 taminny 18 mey, dia miisa 322 no tratry ny tsimokaretina covid-19 (192 taminny 12 mey) vokatry ny fitiliana natao taminny 17 mey (8 ora maraina hatraminny 6 ora hariva), miisa 119 no sitrana (107 taminny 12 mey) ary 203 no manaraka fitsaboana (85 taminny 12 mey). Nisy iray namoy ny ainy taminny faranny herinandro teo, ary niampy iray taminizao fiandohanny herinandro izao.